Semalt: Impumelelo kwiShishini elikwi-Intanethi
Iqela le-Semalt: Iingcali kwiNkonzo yakho
Ukwaziswa kweeNkonzo zeNtengiso yeDijithali
Amashishini aphumelele ngeSemalt. Njani?
Uhlaziyo ngalunye olutsha oluphuma kwiinjini zokukhangela lubamba abanini bamashishini boyika abangaziwayo. Umbuzo oqhelekileyo ujonge yonke indawo - "Ungayibeka njani iwebhusayithi yam kwiphepha lokuqala likaGoogle?"
Ukubeka ubungakanani bewebhusayithi kwiphepha lokuqala le-injini yokukhangela, kufuneka ujonge kwimiba eyahlukeneyo ye-SEO. Njengoko wonke umnini shishini engenabuchule kubugcisa be-SEO, uninzi lweeNtengiso zeDijithali zithembisa ukubanceda.
Kuyavakala, kodwa ziiarhente ezimbalwa ezinokuthenjwa xa kuziwa ekumiselweni kwewebhusayithi kwiphepha lokuqala layo nayiphi na injini yokukhangela. Kule mihla, igama emva kwempumelelo yamashishini amaninzi kwi-Intanethi nguSemalt. Qhubeka nokufunda ukuze ufumane okungakumbi ngayo.
I-Semalt yasungulwa ngonyaka we-2013 njengenkulumbuso ye-IT yenkampani. Intloko yayo ikhona eKyiv, eUkraine.
Inikezela ngeenkonzo zeNtengiso ye-Intanethi esebenzayo kakhulu ngexabiso elinokufikeleleka. I-Semalt ijolise kwiinkonzo zayo kubanini bamashishini, kwiingcali zokuthengisa, kubahlalutyi, nakubaphathi bewebhu kwihlabathi liphela.
Ngokuyintloko, uSemalt unikezela oku kulandelayo:
Ukuphakanyiswa okumgangatho ophezulu we-SEO
Iividiyo zokuKhuthaza ukuShishino
Ukufumanisa ukuba ngaba i-Arhente yokuThengisa ngeDijithali iyasebenza okanye ayisebenzi, fumanisa ukuba zeziphi izibonelelo ezizodwa abazifumanayo. Ngaphandle kokulinganisa ishishini lakho kwiindawo eziphakamileyo, nantsi ezinye izibonelelo ozifumana ku-Semalt:
Iingcali ezinetalente ziyafumaneka ezingama-24x7
Usebenze ngaphezu kwabathengi abangama-300,000
Iinkonzo eziphakamileyo eziphezulu ezibonelelwa ngexabiso eliphantsi
Inkqubo yokuguquguquka eguqukayo iyamangalisa abathengi
Iiarhente zentengiso zedijithali zinokuzisa iziphumo ezilungileyo ixesha ngalinye ukuba zinalo iqela lokuyila, elinetalente, elisebenzayo nelinengqondo ekhuthazayo.
USemalt uyaziqhenya ngokuba neqela eligcwele kwezi mpawu. Kunye neqela likaSemalt , ufumana ngaphezulu kwe-115 yeengqondo eziphambili kumashishini kwimisebenzi yakho.
Ezi ziingcaphephe ziya kuqala ukuqonda iimfuno zeshishini lakho kwaye emva koko zidibanise itekhnoloji kunye namava abo ukukunika iziphumo zeziqhamo.
Umzamo wabo odibeneyo wongeza ubukho be-intanethi kwishishini lakho. Abathengi bakho abanokufumana iwebhusayithi yakho kwisikhundla esiphezulu kwii-SERPs (amaphepha okuKhangela iziphumo zeNjini).
Ukuqonda iSemalt kunye neenkonzo zayo, kubalulekile ukuba uyazi, ubuncinci, iziseko zeNtengiso yeDijithali.
I-SEO imele ukuSebenza kweNjini yokuKhangela. Yinkqubo yokuphucula umxholo wewebhusayithi ukuze ikwoluhlu oluphezulu lwezinto eziphilayo ezinoluhlu lokukhangela.
Kwi-SEO, kukho wena, injini yokukhangela, kunye nomntu okhangela into. Unokuba ngumnini-shishini / ingcali yokuthengisa / umhlalutyi / umphathi wewebhu, kwaye injini yokukhangela ihlala iGoogle.
Masithi ubhale iposti yebhlog elichaza izibonelelo zokuzila kwamanzi. Kwaye, ufuna iinjin zokukhangela ukuba zibonise njengesiphumo esiphezulu xa nabani na ekhangela igama eliphambili, izibonelelo zokuzila zamanzi.
Ukuze ufumane oko, kuya kufuneka wenze ngcono ibhloko yebhlog. UGoogle uza kuyibonisa njengenye yeziphumo eziphezulu xa umntu ekhangela igama eliphambili.
Ukuqonda okungcono i-SEO, bhekisa kwisikhokelo esibonisa-uphawu lwe-SEO yabaqalayo.
Yintoni i-Website Analytics?
Yinkqubo yokuqokelela, yokuhlalutya, kunye nokwenza ingxelo yedatha yewebhusayithi. Inceda abanini beshishini ukuba baqonde kwaye baphucule ukusebenza kwewebhusayithi yabo.
Ngokuhlaziywa kweWebhusayithi, abanini bamashishini bafunda ngezi ndlela zokuziphatha kunye nezinto ezenziwayo zindwendwe kwisayithi yabo:
Bangaphi abantu abatyelele indawo?
Ngaba yayilutyelelo lwabo lokuqala, okanye ngaba babuyela iindwendwe?
Bahlala ixesha elingakanani kule ndawo?
Mangaphi amaphepha afikelele kuwo?
Ngawaphi amaphepha afikelele kuwo?
Bafike njani kwiwebhusayithi - ngekhonkco okanye ngokuthe ngqo?
Kwaye, nokunye okuninzi.
I-SSL imele ukuSebenzisa iiSokisi zoKhuseleko. Itekhnoloji ethe xhaxhe kwinkqubela phambili edibanisa isiphequluli sewebhu kunye neseva yewebhu ngekhonkco elikhuselweyo.
Ngokwesiqhelo, idatha edluliselwe phakathi kweeseva zewebhu kunye nezibhrawuza zikwimo yokubhaliweyo okucacileyo. Ukuba abagqithisi bayayithatha idatha ethunyelwe phakathi kweseva yewebhu kunye nomkhangeli, banokuyisebenzisa kakubi.
I-SSL iqinisekisa ukuba yonke intwana yedatha etshintshelwe phakathi kwebrawuza kunye neseva yewebhu ihlala iyimfihlo. Ukuqonda okungcono, yiya kwiSikhokelo saBaqalayo kwi-SSL: ukuba Uyintoni kwaye Kutheni esenza iwebhusayithi yakho ikhuseleke ngakumbi.
Yinkqubo yokufumana amakhonkco afanelekileyo kwezinye iiwebhusayithi ukuya kwindawo yakho.
Injongo yenkqubo yokwakha iiKhonkco kukuhambisa amakhonkco aphezulu kakhulu kwiwebhusayithi yakho. Yonyusa amathuba okuba iwebhusayithi yakho ibe kwinqanaba eliphezulu kwii-SERPs (amaPhepha eeNjini zokuKhangela).
Ukufumana ulwazi ngakumbi ngenkqubo yokwakha iKhonkco, ungaya kweli phepha le- Wikipedia.
Ipotifoliyo yemveliso yeSemalt ineenkonzo ezininzi zokuThengisa ngeDijithali. Abanini bamashishini abasebenzayo bafumana xa bekhetha i-Semalt kukuba uninzi lweenkonzo zalo zilungele iimfuno zeshishini.
Ezona ziphambili zezi:
Unxibelelwano lwasimahla lwe-SEO
I-AutoSEO sisixhobo esikhethekileyo se-SEO esenzelwe abanini beshishini / iingcali zokuthengisa / abahlalutyi / abaphathi bewebhu:
Ufuna ukwandisa ubukho babo kwi-Intanethi kunye nentengiso
Ngaba banolwazi oluninzi nge-SEO kunye nezinto ezenzayo
Zikhetha ukubona iziphumo ngaphambi kokutyala imali yazo kwinto ethile
Kungekudala emva kokuba ubhalisile kwi-AutoSEO, umhlalutyi wewebhusayithi uza kukuthumela ingxelo emfutshane. Iya kukucebisa ukuba iwebhusayithi yakho ihambelana nemigangatho yeli shishini kwaye yintoni enye onokuyenza ukuphucula isikhundla sayo kwiinjini yokukhangela.
Izibonelelo eziphambili ze-AutoSEO zezi:
Yenza iWebhusayithi isebenze: Iqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho inobuhlobo ngakumbi kwiinjini yokukhangela kwaye iyabambelela kwiindlela eziqhelekileyo ze-SEO.
Ukuphucula ukubonakala kweWebhusayithi: Iyakhuthaza iwebhusayithi yakho ukuba ibe namagama aphambili kwaye iqinisekise ukuba ibekwa phezulu kuGoogle xa umntu ekhangela loo magama aphambili.
Abatyeleli abatsha: Ngokubonakala okuphuculweyo kunye nokunyusa okufanelekileyo, iwebhusayithi yakho iya kutsala umdla wabandwendweli abaninzi. Kwaye, uyazi ukuba iindwendwe ezininzi zithetha inzuzo engaphezulu.
Kwandisa ubukho be-Intanethi: Iyonyusa ubukho be -intanethi kwishishini lakho elininzi, ngenxa yoko, kuvula amathuba okukhula.
I-FullSEO yindlela ephucukileyo kwaye esebenzayo yokwenza isikhundla kwiwebhusayithi ephezulu kwiphepha lokukhangela leGoogle.In FullSEO, iingcali eSemalt zenza iintlobo ezininzi zokwenza iwebhusayithi yangaphakathi nangaphandle. Baqinisekisa ukuba ufumana ngaphezulu kweziphumo ezinqwenelekayo ngexesha elifutshane.
Izibonelelo eziphambili ze-FullSEO zezi:
Yenza iWebhusayithi isebenze: Iqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho kunye nomxholo wayo uhlangabezana nemigangatho ye-SEO. Iya kuphucula ubukho be-Intanethi kwishishini lakho, ngaloo ndlela iyenze idume ngakumbi.
Ukuphuculwa komgangatho weKhonkco : I- FullSEO isusa amakhonkco asezantsi kunye nawemvelo kwindawo yakho. Iyaqinisekisa ukuba ukugcwala kwindawo yakho kuya kuphela kwikhonkco eliphezulu.
Ukuphucula indawo yokuThengisa : I- FullSEO inceda amashishini ukuba anyuse isikhundla sawo semarike kwaye aqhubele phambili kwiintshaba zawo.
Iziphumo ezikhawulezayo nezingaguquguqukiyo zexesha elide: I- FullSEO iqinisekisa ukuba ufumana iziphumo kungekuphela nje kodwa nangokungaguquguqukiyo ixesha elide.
I-E-Commerce SEO ngoSemalt yindlela ephuculweyo yokunceda ishishini elikwi-Intanethi likhule kwaye liphumelele.
Kwi-E-Commerce SEO, iingcali kwaSemalt zibonelela ngesisombululo esikhethekileyo nesinamandla kwishishini lakho. Kuyanceda ekukhuliseni ishishini lakho kwithemba.
Izibonelelo ze-E-Commerce SEO
Okulandelayo zizibonelelo eziphambili ze-E-Commerce SEO:
Abathengi abanomtsalane: I-E-Commerce SEO yokuqala iithagethi zemibuzo eyinxalenye yeshishini lakho. Emva koko kwenziwa izicwangciso ezifanelekileyo zentengiso ukunceda ishishini lakho ekutsaleni abathengi abatsha.
UkuBonelela ngeZiphumo: Njengokuba uninzi lwevenkile ze-E-Commerce zingezizo iinkomo zemali, abanini bazo balindele ukuba imali ebekelwe imali yokunyusa kufuneka izise iziphumo ezifunwayo. I-E-Commerce SEO iqinisekisa ukuba utyalomali lwabo luza neziphumo ezifanelekileyo ngexesha elifutshane.
Ukufakwa kwinqanaba lamagama aphambili kwamagama asezantsi: I-E-Commerce SEO iqinisekisa ukuba iiwebhusayithi zakho ziphezulu ngenxa yamagama aphambili asezantsi. Kungenxa yokuba abantu abakhangela ngamagama asezantsi asezantsi bathi bahlala bethenga xa befika kwivenkile efanelekileyo kwi-Intanethi.
Uhlalutyo lweNiche: Iingcali ze-e-commerce kunye ne-SEO kwaSemalt zenza uhlalutyo lobuchule kwishishini lakho niche. Baqokelela ulwazi kwaye balusebenzise ukuseta eyona ndlela isebenzayo yokuphumelela kwishishini lakho elikwi-Intanethi.
Sisisixhobo sokuhlaziya esiphambili esikukunceda ukuba ujonge okwenzekayo kwimarike. Ikuvumela ukuba ulandelele isikhundla seentshaba zakho.
Isixhobo seWebhusayithi soHlaziyo seSemalt sikunika:
Iingcebiso zamagama aphambili amabinzana afanelekileyo orhwebo
Ukulandelela imihla ngemihla iwebhusayithi yakho kwi-injini yokukhangela
Inqanaba lokuthandwa kweshishini lakho
Indawo yokujonga kunye nokujonga isikhundla samagama aphambili akho
Indawo yokuphanda kunye nokufunda uluhlu lweinjini yokukhangela yeentshaba zakho
Izibonelelo eziphambili zezixhobo zeWebhusayithi zohlalutyo zezi:
Indawo yokubeka iliso kwiWebhusayithi: Esi sixhobo sinceda ekufumaneni isikhundla seshishini lakho kwimarike. Olu lwazi lusibonisayo likuvumela ukuba ubone izinto ezintle kunye nezimbi eziphembelela isikhundla sendawo yakho.
Ukubek 'esweni indawo abaKhuphisana nayo : Esi sixhobo esivela kwaSemalt sikwabhengeza iinkcukacha zeentshaba zakho. Ungasebenzisa ulwazi olunikezela ngalo ukuze ufumane inzuzo.
Inceda ekuFumaniseni iMarike eNtsha: Idatha ayifumanayo emva kohlalutyo lweshishini lakho iyanceda ekufumaneni amathuba amatsha okukhula kwiimarike ezintsha.
Ukuguqula idatha ibe kwiifomathi ezibonakalayo: Ungagcina yonke idatha enikezwe kwesi sixhobo ngendlela yeefayile zePDF kunye ne-Excel.
Indawo eqala nge-HTTPS ikhuselekile, iyathandeka kuGoogle, kwaye inomdla ngakumbi kubandwendweli. I-Semalt inikezela ngezatifikethi ze-SSL zokukhusela iwebhusayithi kwaye iyenze ibe sengozini yokuhlaselwa.
I-Semalt inikezela ngokubonisana kwamahhala kwe-SEO apho iingcali zayo zichonga imiba ye-SEO kunye nendawo yakho kwaye inike iingcebiso zokuphucula ubukho bayo kwi-intanethi.
Ke, ezi nkonzo zivela ku-Semalt ziyaqinisekisa ukuba ishishini lakho elikwi-intanethi lifumana impumelelo enkulu ngexesha elincinci.
La mabali athetha konke ngohambo oluyimpumelelo lwabathengi. Abanye abathengi baya kwinkonzo enye, abanye bathi baninzi, kwaye abanye baye babhenele kwi-SEO yasimahla ngaphambi kokwenza umnxeba wokugqibela.
Uphengululo lwaBathengi lwe-AutoSEO
Xa kuziwa kwi-AutoSEO, iiwebhusayithi ezingaphezulu kwe-5,000 zikhule nge-Semalt. Ukujonga ngokwakho, yiya kwiphepha leMbali yokuPhumelela yeSemalt . Apha, unokuhluza ezi ndawo ngokommandla kunye nemimandla.
Amanani ayitsho yonke, okanye kwimeko kaSemalt, abathengi bayithetha yonke loo nto. Ungandwendwela iphepha labaNgqinisisa baBathengi kwaye udlule kwi-vidiyo engama-33 yobungqina kunye ne-146 ubungqina obubhaliweyo. Fumana nje ukuba incede njani amakhulu abathengi ekuphuculeni ishishini labo kwi-Intanethi.
AbaThengi bemicimbi ye-SEO
Ngaba uyafuna ukuziva uhambo oluyimpumelelo lwabathengi bakaSemalt? Ukufikelela nje i Abathengi seo iphepha Amatyala kunye ukuhlangabezana abaxhasi babo abaye ikhule kakhulu ngeenkonzo Semalt SEO.
I-Semalt yenye yeentengiso ezimbalwa zeNtengiso zeDijithali ezigubungela amazwe angaphezu kwe-155 kumazwe ase-SEO.
Bangaphezu kwe-210 abathengisi beenkonzo zeSemalt.
Abasebenzi be-Semalt banolwazi kwiilwimi ezininzi. Bakhonza abathengi, nokuba bathetha luphi ulwimi.
Ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-30,000 ezikhuthazwe nguSemalt kuluhlu oluphezulu lwe-10 lweziphumo zokukhangela.
USemalt unodliwanondlebe owahlukileyo wokufumana udliwanondlebe, iTurbo-Turtle, ekwanophawu lweSemalt. Kuyinto yokusebenza kakubi, bahlala eofisini yabo lonke ixesha.
Kweli lizwe ledijithali, i-SEO sisitshixo sempumelelo. Ukuba ubambe ulwazi olwaneleyo malunga ne-SEO kwaye unexesha lokwandisa indawo yakho, yenze ngokwakho.
Nangona kunjalo, eyona ndlela intle kukuqesha iinkonzo zeArhente yokuthengisa yeDigital egcweleyo, enjengeSemalt, kwaye mababaphathe zonke iimfuno zentengiso ye-intanethi yeshishini lakho.